Akaiswa mukati [ALARM AIVD], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we4 September 2017	• 19 Comments
I Stasi ndiyo yainyanya kukosha kuEast German njere nekuchengetedza basa panguva yeCold War, uye yakaonekwa seinobudirira zvikuru munyika. I Stasi yaiva basa rakavanzika uye rakanyatsokonzerwa neKGB yeSoviet Union. Kunyange zvazvo Stasi muna 1990 mushure mekuwa kweBurlin Wall yaizobvumirwa kutongwa, [...]
Rusununguko rwokutaura, rwokutaura uye rwekufunga runogona kupera mukati megore
Akaiswa mukati [ALARM AIVD], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we2 September 2017	• 19 Comments
Kana iwe uchifunga kuti "Oh, izvozvo hazvisi kuenda nokukurumidza", iwe hauna kuteerera. Iwe unokanganisa mapepa ako uye funga kuti: "O, zvakanaka, iwe unogona kutaura zvishoma zvishoma zvaunofunga, ini handiri mumwe munhu anoda kupa maonero angu pane chimwe chinhu nezvose", [...]
Izvo zviriko here kana kuti kwete 'zvepabonde chiito chekuita zvepabonde nevana uye zvibayiro zvevana'?
Akaiswa mukati [ALARM AIVD], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 29 August 2017	• 27 Comments
Kunzwisisana kuduku kunoda kubviswa. Apo ini ndikati Ronald Bernard mutambi anoshandisa nzira dzeNLP kuti agutsikane vanhu kuti vave nhengo yeHarare Bank ne nyaya inofadza kugadzirisa mafungiro, izvi hazvirevi kuti zvepabonde zvinokonzerwa nekushungurudzwa kwevana kana chibayiro che [...]
Ronald Bernard anonyengedza uye kuparadzwa kwekutonga kwemazano
Akaiswa mukati [ALARM AIVD], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 28 August 2017	• 16 Comments
Apo Indaneti yakangosvika pairi yakanga inonakidza uye iwe haugoni kumirira zvimwe kukurumidza uye iwe unogona kuwana nekutsinhanisa mamwe mashoko. Panguva iyi, isu hatizivi zviri nani uye nekuda kwevana vaduku nguva iyo pakanga pasina mafoni efoni ingangodaro nguva yakaipa-yakasakara iyo iwe usingadi mu [...]
Ronald Bernard, Irma Schiffers, Ad Broere, Coocperatie Vrije Media: AIVD kuchengetedzwa kwevadzidzi vanoda chokwadi?
Akaiswa mukati [ALARM AIVD], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 15 August 2017	• 55 Comments
Muchikamu chino ndinoda kuenda muchidimbu pamusoro pechikonzero nei ndatozvitaura mune zvinyorwa zvishomanana izvo zvinyorwa zvinoshandiswa muNetherlands zvakanyatsodzorwa. Ini ndiine chinangwa cheku "kutungamirirwa nebasa rakavanzika". MuNetherlands, boka racho rinonzi AIVD. Kuti uratidze kuti, iwe chaizvoizvo unofanira [...]
'Desinfo agents & vatorwa' VERSUS 'inoratidza matambudziko chaiwo munyika uye vauye kuzoita'
Akaiswa mukati [ALARM AIVD], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 30 June 2017	• 7 Comments
Iko nhasi maitiro chaiwo kutaura nezve 'matrix'. In rangu rokupedzisira nyaya Martijn Van Staveren I akatsanangura sei desinfo vamiririri rangu maonero, kushanda yakachengeteka mambure nokuda chisinga- kuti shoko iri opaque sango ruzivo (vanonzi) uye ruzivo uye kuita kuzochera tariro [...]
Frans Heslinga nyika yakadzika inofara avo vanofunga nezvepfungwa vanofunga kufunga?
Akaiswa mukati [ALARM AIVD], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 6 July 2016	• 24 Comments
Chaizvoizvo, zviri nani kusava nehanya nemhando idzi dzemakwenzi, asi Frans Heslinga iko zvino yakasimudzirwa mune imwe nhau yevhidhiyo uye nhepfenyuro yakawanda, iwe unofanidza kuitumidza. kunge pane PSYOP itsva (zvepfungwa akavhiyiwa) tactical raparurwa kubatanidza chero yakaoma kufunga kupenga pfungwa mhando. The 'flat [...]
Nzvimbo yakadzika yenyika, nengozi isina njodzi!
Akaiswa mukati [ALARM AIVD], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 4 July 2016	• 8 Comments
Vhiki yapera, ini ndakatenga nemaune izvo zvinonzi 'flat-earth theory', nokuti kamwe kamwe kwakave nekuwanda kwemakakatanwa kubvira 2015. Ichokwadi, ndeyechokwadi, dzidziso yakakwana yehuni, iyo kune ani zvake ane ruzivo rudiki rwemasvomhu nefizikiki inogona kutumidzwa kunyika yenhema, asi kuoneka kwe "kufamba" [...]
Nyika yakatsetseka kana Pasi Pasi yedzidziso ndiyo PsyOp yekuisa vatsvakurudzi pasi peboka revarume
Akaiswa mukati [ALARM AIVD], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 29 June 2016	• 22 Comments
IInternet ikozvino inoputika nemavhidhiyo, mavhidhiyo eYouTube uye web blogs zvinoratidzika zvakanyanya kufungidzira kuti zvinyorwa zvemashoko zvakadini uye yakarongeka zvakarongwa zviri kubiridzira kwatiri. Izvi zvinowanzoongororwa nekutsvakurudza kwakanaka. Chii chiri kuitika iye zvino, zvisinei, ndechokuti idzi dzidziso (dzakachenjera zvikuru uye dzakanatswa) dzakabatanidzwa kune "vatsvakurudzi" avo [...]
Kushanya kwakazara: 4.310.230